အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်မတ်လလက်တင်အမေရိက - World March ကိုဖြတ်သန်းသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » တရားဝင်ဆက်သွယ်ရေး » အကြမ်းမဖက်မှုအတွက်မတ်လဟာလက်တင်အမေရိကကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်
20 / 06 / 2021 20 / 06 / 2021 အားဖြင့် Admin ကမ္ဘာ့မတ်လ
လက်တင်အမေရိကတွင်မတူကွဲပြားသည့်ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသောလူမျိုးများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို စုစည်း၍ အငတ်ဘေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ ရောဂါနှင့်သေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြမ်းဖက်နည်းလမ်းများအားစွန့်လွှတ်ပြီးလူသားများကိုနာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများထဲသို့နစ်မြုပ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အကြမ်းဖက်မှုကငါတို့လူမျိုးတွေကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု - စနစ်တကျသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ လူများပျောက်ဆုံးခြင်း၊ လူမှုရေးဆန္ဒပြမှုများကိုဖိနှိပ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၊ လူကုန်ကူးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ - အလုပ်မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အိုးအိမ်မဲ့ခြင်း၊ ရေမရှိခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းစသဖြင့်။
ဂေဟစနစ်များပျက်စီးခြင်း၊ မျိုးစိတ်အားလုံး၏ကျက်စားရာနေရာများဖြစ်သောအကြီးစားသတ္တုတူးဖော်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးအဆိပ်သင့်စေသောမီးခိုးမြူများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ တောမီးများ၊
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသံနှင့်ခံစားမှုများကိုပေါင်းစည်းရန်၊ စဉ်းစားရန်၊ အခြားသူများထိုသို့ပြုရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
သန်းနှင့်ချီသောကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ၊ ဘာသာစကားများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုသည်လူ့သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုအကြမ်းမဖက်ခြင်း၏အလင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။
Humanist Movement ၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သောစစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကင်းမဲ့သောကမ္ဘာကြီးသည်အခြားအုပ်စုများနှင့်အတူမြှင့်တင်ပြီးစည်းရုံးခဲ့သည် ချီတက်ပွဲ သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုခရီးသွားလာခြင်းဟာအကြမ်းမဖက်တဲ့စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးလူသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုမြင်လာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အရေးပါသောမှတ်တိုင်များမှာ -
2017- ပထမ ဦး ဆုံးဗဟိုအမေရိကန်မတ်လ
2018- ပထမ ဦး ဆုံးတောင်အမေရိကမတ်လ
2019- 2020 ။ ဒုတိယကမ္ဘာမတ်လ
2021- ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၂ ရက်အထိချစ်မြတ်နိုးရသည့်ဒေသတစ်လျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခြင်း၊ ဤအချိန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအသစ်တစ်ခုကိုဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ကြေငြာသည်။ လက်တင်အမေရိကန်- NOVIOLENCE အတွက်မျိုးစုံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပconflictsိပက္ခများကိုအပြုသဘောဆောင်။ အပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဤကမ္ဘာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တိုးမြှင့်ရေးအတွက်ချီတက်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အော်ဟစ်သံကိုတိုးမြှင့်စေရန်တိုက်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောကိုယ်တိုင်ပါပါသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် လူ့။ ငါတို့၏အပေါင်းအဘော်ချင်းတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုငါတို့မမြင်ရ.
လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရေဘီယံလူမျိုးများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၊ ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ဒီနယ်မြေရဲ့အာဖရိကသားစဉ်မြေးဆက်တွေနဲ့နေထိုင်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့နဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျနော်တို့စည်းရုံးလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
1- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကျား၊ မ၊ နှုတ်၊ စိတ်၊ စိတ်ပညာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာရေးစသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးအစားအားလုံးကိုခုခံကာကွယ်ပါ။
4- ၎င်းကပwarိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်စစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်နက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုရယူရန်အတွက်ဘတ်ဂျက်လျှော့ချပါ။
5- နိုင်ငံခြားစစ်အခြေစိုက်စခန်းများတပ်ဆင်ခြင်းကိုမလုပ်ပါနှင့်၊ နှင့်အားလုံးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်.
6- ဒေသတစ်ခုလုံး၌နျူကလီးယားလက်နက်များတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အားပေးပါ။ Tratelolco II ၏စာချုပ်၏ဖန်တီးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်။
7- ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်အညီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏တည်ဆောက်မှုကိုမျက်နှာသာ ပေး၍ အကြမ်းမဖက်သောလုပ်ရပ်များကိုပြုလုပ်ပါ။
8- အကြမ်းမဖက်သောလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မျိုးဆက်သစ်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သောနေရာများတည်ဆောက်ပါ။
9- သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်သီးနှံများတွင်ပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်း၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ပြင်းထန်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိအမြင်မြင့်မားလာစေရန် လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်ရေကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်း။
10- လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်ယဉ်ကျေးမှု၊ အခမဲ့လက်တင်အမေရိကအတွက်။
11- ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံများအကြားပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံသားတစ် ဦး အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်လူများ၏လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကိုရရှိနိုင်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသကိုလှည့်လည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမျှော်မှန်းသည် လက်တင်အမေရိကသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံသမိုင်းကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်သည် မတူကွဲပြားမှုနှင့်အကြမ်းမဖက်အတွက်ပေါင်းစည်း၏။
လူသားအများစုသည်အကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားကြပါ ကဖယ်ရှားပစ်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်လောင်းနားလည်ကြသည် လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် ဒီပါမယ်မပြောင်းလဲနိုင်သောအဖြစ်မှန်ဝန်းရံ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေနှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်ကိုခိုင်ခံ့စေပါ လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: https://theworldmarch.org/marcha-latinoamericana/ နှင့်ချီတက်ပွဲနှင့်၎င်း၏ဖြစ်စဉ်ကို: လက်တင်အမေရိက - မတ်လ ၁ ရက် - ကမ္ဘာ့မတ်လ (theworldmarch.org)
"အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်မတ်လသည်လက်တင်အမေရိကကို ဖြတ်၍ ခရီးတစ်ခု" တွင် ၄ မှတ်ချက်များ
28:08 မှာ 2021/14/44
28:08 မှာ 2021/14/47
DHEQUIDAD ကော်ပိုရေးရှင်းမှကျွန်ုပ်တို့သည်ချီတက်ပွဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ လူတိုင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သုခချမ်းသာကိုနှုတ်ဆက်သည်။
06:09 မှာ 2021/15/34
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ပုံတွေကို png format နဲ့ငါ့ကိုပို့ပေးနိုင်မလား။ ၎င်းသည်အာဂျင်တီးနားတွင်ပုံနှိပ်ရန်ဖြစ်သည်
Pingback: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ - ကမ္ဘာ့မတ်လ